खुशीको खबर ! नेपाल सिधै टि २० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा «
खुशीको खबर ! नेपाल सिधै टि २० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा
प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७७, सोमबार २२:२१
एजेन्सी – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ले अष्ट्रेलियामा सन् २०२२ मा हुने टि२० विश्वकपको लागि जारी गरेको छनोट प्रक्रिया अनुसार नेपालले सिधै ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।
इसीसीले सोमबार छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्दै नेपालसहित यूएई, सिंगापुर र जिम्बावेलाई सिधै ग्लोबल छनोटमा स्थान दिएको हो । फेब्रुअरी र मे २०२२ मा हुने ग्लोबल छनोटमा सफल भए नेपालले सन् २०२२ अक्टोबरमा हुने विश्वकपमा खेल्न पाउनेछ । ग्लोबल छनोटबाट कुल ४ टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन् । दुई समूहमा हुने ग्लोबल छनोटबाट २-२ टोली विश्वकपमा खेल्नेछन् ।
ग्लोबल छनोटमा कुल १६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । क्षेत्रीय छनोटबाट ८ टोली तथा सन् २०२१ को टि२० विश्वकप खेलेका विश्व वरियताको पुछारमा रहेका ४ टोलीले ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । क्षेत्रीय छनोटमा अमेरिका र युरोपबाट २-२ टोली तथा अफ्रीका र पूर्वी एसियाबाट १-१ टोली छनोट हुनेछन् । एसिया छनोटको दुवै समूहबाट १-१ टोलीले ग्लोबल छनोटमा खेल्नेछन् ।
छनोट प्रक्रिया १३ महिना चल्नेछ र कुल २ सय २५ खेल हुनेछन् । नेपाल पछिल्लो पटक सिंगापुरमा भएको एसिया छनोट प्रतियोगितामा लज्जास्पद प्रदर्शन गर्दै बाहिरिएको थियो । यसपटक भने विश्व वरियतामा राम्रो स्थान भएपछि आइसीसीले नेपाललाई सिधै ग्लोबल छनोटमा स्थान दिएको हो ।